नङको रङ फेरिँदै छ ? सावधान … – ताजा समाचार
नङको रङ फेरिँदै छ ? सावधान …
काठमाडौँ । हाम्रो नङको रङले हाम्रो स्वास्थ्यबारे धेरै खुलासा गरेको हुन्छ । तसर्थ यदि हाम्रो नङको रङ बदलिँदै छ र पहिलेको तुलनामा निकै पहेँलो हुँदै गएको छ भने यसले हाम्रो शरीरमा रगतको कमी हुँदै गएको जनाउँछ।
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : May 4th, 2020,